Tarehimarika farany momba ny fifamoivoizana ao amin'ny seranam-piaramanidina Fraport tamin'ny septambra 2021: tsara!
Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Tarehimarika farany momba ny fifamoivoizana ao amin'ny seranam-piaramanidina Fraport tamin'ny septambra 2021: tsara!
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao • Fandefasana gazety • fanorenana • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny seranam-piaramanidina Frankfurt (FRA) dia nandray tsara mpandeha 3.1 tapitrisa tamin'ny volana septambra 2021 - maneho fiakarana 169.1 isan-jato isan-taona, na dia ampitahaina amin'ny volana septambra tena malemy aza.
Ny fitomboan'ny mpandeha dia notohizan'ny fifamoivoizana tamin'ny andro fialantsasatra. Tamin'ny volana nitaterana, ny isan'ny mpandeha FRA - raha mbola nandefa fihenam-bidy 54.0 isan-jato raha oharina tamin'ny volana septambra 2019 - dia nahatratra ny antsasaky ny ambaratongam-pandemika mialoha, ary nanohy ny fironana tsara napetraka tamin'ny Aogositra 2021.
Nandritra ny sivy volana voalohany tamin'ny 2021, 15.8 tapitrisa ny mpandeha notaterin'ny FRA. Izany dia niteraka fihenam-bidy 2.2 isan-jato raha oharina amin'ny vanim-potoana iray tamin'ny taon-dasa, raha oharina amin'ny slide mitaky 70.8 isan-jato raha oharina amin'ny sivy volana voalohany amin'ny 2019.
Ny fizarana entana (airfreight + airmail) dia nanohy ny fitomboany matanjaka tamin'ny septambra 2021, nitombo 13.4 isan-jato isan-taona hatramin'ny 188,177 metric taonina.
Raha ampitahaina tamin'ny volana septambra 2019, ny taonina enta-mavesatra dia nahatratra 7.7 isan-jato tamin'ny volana nitaterana. Ny hetsiky ny fiaramanidina dia nisondrotra 66.1 isan-jato isan-taona ka hatramin'ny 28,135 dia niainga sy niantsona. Niakatra 61.5 isan-jato hatramin'ny 1.8 tapitrisa metric taonina ny lanja farany ambony (MTOW) voangona.
Tamin'ny volana septambra 2021, ny seranam-piaramanidina ao amin'ny portfolio iraisam-pirenena Fraport dia nanohy nitatitra ny fahombiazan'ny fifamoivoizana. Ankoatra ny seranam-piaramanidina Xi'an (XIY) any Sina, ny seranam-piaramanidina Fraport's Group dia nahatratra fitomboana lehibe. Any amin'ny seranam-piaramanidina Group sasany, ny fifamoivoizana mpandeha dia nitombo maherin'ny 100 isan-taona isan-taona - na dia nihena be aza ny tahan'ny fifamoivoizana tamin'ny volana septambra 2020. Raha ampitahaina amin'ny septambra talohan'ny pandemika tamin'ny volana septambra 2019, ny ankamaroan'ny seranam-piaramanidina Group an'ny Fraport dia mbola nanoratra tarehimarika ambany ihany. Na eo aza izany, ny seranam-piaramanidina Vondrona sasany izay manome toerana itodiana mpizahatany be mpitady - toy ny seranam-piaramanidina grika na seranam-piaramanidina Antalya eo amin'ny Riviera Tiorka - dia nitombo hatrany amin'ny 80 isan-jaton'ny haavon'ny krizy tamin'ny volana nitaterana (ampitahaina tamin'ny volana septambra 2019).
Seranam-piaramanidina Ljubljana (LJU) ao an-drenivohitr'i Slovenia dia nandray mpandeha 65,133 2021 tamin'ny volana septambra 820,169. Tao amin'ny seranam-piaramanidina Breziliana Fortaleza (FOR) sy Porto Alegre (POA), nitombo ny fifamoivoizana ka nahatratra 1.1 ny mpandeha. Ny seranam-piaramanidina Lima any Lima (LIM) dia nahazo mpandeha efa ho XNUMX tapitrisa tamin'ny volana nitaterana.
Ny fifamoivoizana tanteraka ho an'ny seranam-piaramanidina erantany 14 dia nisondrotra hatramin'ny 3.4 tapitrisa ny mpandeha tamin'ny volana septambra 2021. Teo amin'ny morontsiraky ny Ranomasina Mainty Bulgaria, ny seranam-piaramanidin'ny Twin Star an'ny Burgas (BOJ) sy Varna (VAR) dia nitatitra ihany koa ny fifamoivoizana avo indrindra miaraka amina mpandeha 328,990 3.8 nanompo . Seranam-piaramanidina Antalya (AYT) any Torkia no nandray mpandeha manodidina ny 1.9 tapitrisa. Ny seranam-piaramanidina St. Petersburg Pulkovo (LED) any Russia dia nanana mpandeha manodidina ny 2.3 tapitrisa. Ny seranam-piaramanidina Xi'an (XIY) any Shina dia nahitana mpandeha latsaky ny XNUMX tapitrisa tamin'ny volana nitaterana.
Ampidino ny angona fifamoivoizana (PDF)